Sexy ရပ်ဘီအားဖြင့်ဂျာစီထုပ် | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » Sexy ရပ်ဘီအားဖြင့်ထိုးပြီးဦးထုပ်
အဆိုပါခွက်ချမ်းထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စှနျးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ထင်မျှသာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဆက်စပ်ပစ္စည်း, မရှိကြပေ။ သူတို့ကအစမရှိ, ရာသီနှင့်အခွအေနအရေးပါ, သင့်စတိုင်မှပြီးပြည့်စုံသောအပန်းဖြေသော့ပူဇော်!
အဆိုပါအွန်လိုင်းစတိုး sexy ရပ်ဘီ စတော့ရှယ်ယာထုပ်မိမိစုဆောင်းမှု၏သော့ချက်ကိုအပိုင်းပိုင်း၏တဦးတည်းပေးထားပါတယ်။ Heather မီးခိုးရောင်, မီးသွေးအရောင်နဲ့နက်ရှိုင်းသောအမည်းရောင်အတွက်ရရှိနိုင်ပါကအလင်းထိတွေ့ပူဇော်ဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့စတိုင်များကိုက်ညီ။ သငျသညျနွေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနေဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းသော်လည်း, beanie ရှည်လျားအားလုံးထုပ်စတိုင်များအကြားတစ်ဦးဂန္ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည် အပေါင်းပါ mode ကို, သင့်စတိုင်မှ nonchalance တစ်သိသိသာသာထိတွေ့ပေး။
ကဒီဇိုင်းအဆိုပါ beanie sexy ရပ်ဘီ အားလုံးရာသီလုပ်နေတယ်, နှစ်ဦးစလုံးကိုအမျိုးသမီးများကထက်လူ။ ဤသည် unisex ဆက်စပ်ပစ္စည်းထို့ကြောင့်တစ်ခု universal အဖော်လူးဝစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ညှဉ်းဆဲတတ်သောမရှိဘဲသင်၏ဦးခေါင်းခွံ၏ပုံသဏ္ဌာန် fit မှသကဲ့သို့၎င်း၏ထည်, ဿုံ elastic ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 170 g / m²စီတန်းဂျာစီ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအခြေအနေများတွင်နှစ်သိမ့်အဘို့, ဦးထုပ် 63% polyester, 32% ဝါဂွမ်းနှင့် 5% elastane ကိုဖန်ဆင်းသည်။ တဦးတည်းတစ်ခုတည်းအရွယ်အစားရရှိနိုင်ပါသည်: အဆိုပါဆက်စပ်ပစ္စည်းချွင်းချက်မပါဘဲနှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲလူတိုင်းကိုက်ညီ!
ထုတ်ကုန် Sexy ရပ်ဘီနှင့်အတူစတိုင်များတွဲဘက်နှင့်ဖန်တီး
ထို့အပြင်ထိုစတိုးဆိုင်၏ပုံသဏ္ဍာန် beanie ဦးထုပ်ဂျာစီဿုံအခြားအဆိုပြုထားအပိုင်းပိုင်းကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအပါအဝင် လူတို့သညျအဘို့ချွေးထွက် hoodie သို့မဟုတ်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Sexy ရပ်ဘီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပ္ပံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်များ, အရှင်သင်အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီကြောင်းစတိုင်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပေါင်းစပ်! တစ်ဦးထက်ပိုပေါ့ပေါ့ကြည့်ဘို့အလိုဆန္ဒ? သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များရပ်ဘီ Sexy နှင့်အတူရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သမျှသောအပန်းဖြေပူဇော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဦးထုပ်ကိုရှေးခယျြ!
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Find ဦးထုပ်များနှင့်ဦးထုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ရပ်ဘီ
Black ကသောကြာနေ့: - 15% ဟာ Off အားလုံး! "